Mareykanka oo 12 qof Shacab ah ku dilay duqeyn ka dhacday magaalada Kaabuul. – Somalimirror.net
Mareykanka oo 12 qof Shacab ah ku dilay duqeyn ka dhacday magaalada Kaabuul.
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya duqeymo khasaara badan dhaliyay oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Kaabuul ee caasimadda Afghanistan.
Ugu yaraan 12 qof shacab ah oo ay kamid yihiin 6 carruur ah ayaa laxaqiijiyay in ay ku dhinteen duqeynta oo ka dhacay wadada xiriirisa garoonka diyaaradaha caalamiga Kaabul iyo magaalada caasimadda ah.
ilaha caafimaadka ayaa sheegaya in dadka dhintay ee rayidka ah meydadkooda lagasoo aruuriyay wadada hareeraheeda, sarkaal uhadlay taliska dhexe ee ciidanka dowladda Mareykanka ayaa sheegay in ay beegsadeen gaari ay ka shakiyeen isagoo qiray in dad shacab ah ay wax ku noqdeen duqeyntan.
Wararka ayaa intaas ku daraya in xaalad deganaan la’aan ah ay ka jirto hareeraha madaarka magaalada Kaabuul halkaas oo dhaq dhaqaaqii ugu dambeeyay ee insixaab ah ay ka wadaan ciidamada jinsiyadaha kala duwan leh.
Imaarada Islaamiga ah ayaa sheegtay in ay ciidamadeedu kaabiga ku hayaan garoonka kaabuul qeybta melleteriga ayna isku diyaarinayaan in ay lawareegaan saacadaha soo socda.
Afhayeen uhadlay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Washington ayaa carabaabay in wixii ka dambeeya 31-ka bishan agoosto oo berri ku beegan aysan wax saameyn diblumaasiyadeed ah kuyeelan doonin dalka afghanistan ayna labaxayaan dhammaan shaqaalihii safaaradda iyo ciidamada meleteriga.
Hay’adaha sheegta in ay udoodaan xuquuqulMareykanka oo 12 qof Shacab ah ku dilay duqeyn ka dhacday magaalada Kaabuul insaanka ayaa Mareykanka ugu baaqay in uu soo gaba gabeeyo dhammaan howlgalladiisi meleteri ee afghanistan uuna joojiyo cabsida laga qabo in uu saldhigyo meleteri ka sameysto dalalka dariska la ah afghanistan.
Mas’uuliyiin American ah ayaa bishii lasoo dhaafay sheegay in dalalka dariska la ah Afghanistan ay kala socan doonaan xaaladda jihaadiyiinta ayna fulin doonaan duqeymo xagga cirka ah oo ka dhan ah wax ugu yeereen kooxaha argagaxisada ah oo ay ula jihaadiyiinta.
Previous PostCiidamada Yugaandha Oo Lagu Weeraray Koonfurta Soomaaliya.
Next PostHaweeney katirsan Milliteriga Maamulka Hir Shabeelle Oo Hiiraan Lagu dilay.